Xog+akhriso ahlusunna oo madaxweyne qoor qoor albaab walba ka xirtay iyo Ugaaskii ceyr oo…….. | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xog+akhriso ahlusunna oo madaxweyne qoor qoor albaab walba ka xirtay iyo Ugaaskii...
Xog+akhriso ahlusunna oo madaxweyne qoor qoor albaab walba ka xirtay iyo Ugaaskii ceyr oo……..
Kadib Doorashadii Axadii Isbuucani ka dhacday Dhuuso mareeb Ee Cali Ciid iyo Axmed Qoor qoor Hogaanka loogu doortay waxay heleen taageero badan balse Dadka Reer galmudug ayaa qaar ka hor yimid.
Ahlusuna oo qudheeda sameysatay Madaxweyne gaar ah ayaa waxa Sheekh Shaakir uu ganafka ku dhuftay inuu la shaqeeyo ama wax wada darsi la sameeyo Qoor qoor maamulkiisa.
Waxay Ahlusuna taas badelkeeda isku uruursaneysaa Ciidankeedii oo hadda iyo bilow ay Awoodoodii dib usoo ceshaneysaa.
Ilo madax banaan ayaa inoo sheegay in Axmed Qoor qoor uu dalab udiray Ugaaska Beesha Ceyr Ugaas Xasan Ugaas Maxamed si Hogaanka Ahlusuna ooBeeshaas ku abtirsada ay ugu daba feylmi lahaayeen Maamulka Dawladu aqoonsan tahay.
Ugaaska Ceyr ayaa waxa uu hore u ayiday Safaradii Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Kheyre ku kala bixiyeen Sanadkii Hore 2019-kii Deegaanada Gobolka Gal gaduud oo Dhuuso mareeb ku jirto.
Ma Cada sida uu kaga soo kaban karo Qoor qoor qorshihiisa iyo Guuldarada ay Ahlusuna ku dhigtay sheegtayna in Amaanka Dhuuso mareeb ay dib ula wareegi doonaan.
Previous articleSh shaakir oo ku dhaqaaqay talaabo aan laga filanayn(akhriso)
Next articleXiisad Dagaal oo u dhaxaysa Galmudug iyo puntland taagan duleedka gaalkacyo iyo Gadiidka Dagaalka ……